Imixholo yezihloko ze-imeyile Amagama aqala amacebo okucoca uSpam | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 19, 2011 NgoLwesine, Julayi 10, 2014 Douglas Karr
Eyona ndlela ilula yokufumana ii-imeyile ngendlela ethe ngqo kwifolda ye-SPAM ngamagama asetyenziswe kumgca wesifundo sakho. I-SpamAssassin sisicelo sokuvimba ugaxekile esivulekileyo esipapasha imigaqo yaso yokuchonga I-SPAM kwi-Wiki yabo.
Nayi imigaqo SpamAssassin isebenzisa ngamagama kumgca wesifundo:
Umgca wesifundo awunanto (Enkosi Alan!)
Isifundo sinamagama olumkiso, impendulo, uncedo, isindululo, impendulo, isilumkiso, isaziso, ukubingelela, umcimbi, ukuhlawulwa, ukutyala, ityala, uxanduva okanye ukuphinda usebenze kwakhona ... okanye ukungachazwa kakuhle kwala magama.
Umxholo wesifundo uqulethe inyanga efinyeziweyo (umzekelo: ngoMeyi)
Umgca wesifundo uqukethe amagama athi cialis, levitra, soma, valium okanye xanax.
Umxholo wesifundo uqala ngo "Re: omtsha"
Umxholo uqulethe "enkulu"
Umxholo uqulethe "ukuvuma" okanye "ukuvuma"
Umxholo uqulethe "ngaphandle kweendleko"
Umxholo uqulethe "amanyathelo okhuseleko"
Umxholo wesifundo uqulethe "ngexabiso eliphantsi"
Umgca wesifundo uqulethe "amaxabiso aphantsi"
Umxholo womxholo uqulethe amagama "njengoko kubonwe".
Umxholo wesifundo uqala ngophawu lwedola ($) okanye ugaxekile ekubhekisweni kwemali kuwo.
Umxholo womxholo uqulethe amagama "amatyala akho".
Umxholo uqulethe amagama athi "usapho lwakho".
Umgca wesifundo uqulethe amagama athi "akukho myalelo" okanye "ukuxuba i-intanethi".
Umgca wesihloko uqala nge ulahlekelwe, "Ukunciphisa umzimba", okanye uthetha ngokunciphisa ubunzima okanye iiponti.
Umgca wesifundo uqala ngokuthenga okanye ukuthenga.
Umxholo uthetha into embi malunga nolutsha.
Umxholo wesihloko uqala ngo "Uyaphupha", "Ngaba unayo", "Ngaba uyafuna", "Uyathanda", njl.
Umxholo wesifundo WONKE AMAKHAYA.
Umgca wesifundo uqulethe inxenye yokuqala yedilesi ye-imeyile (umzekelo: umxholo uqulethe "uDave" kwaye i-imeyile ibhekiswe kuyo Ukusa@ domain.com).
Umgca womxholo uqulethe umxholo ocacileyo ngesondo.
Umgca womxholo uzama ukufezekisa okanye ukupela amagama ngokungagqibekanga. (umzekelo: c1alis, x @ nax)
Umgca wesifundo uqulethe ikhowudi ye-UCE yesiNgesi okanye yaseJapan.
Umgca wesifundo uqulethe i-tag ye-imeyile engacelwanga yaseKorea.
Kwimeko apho ubungazi ukuba livela phi igama elithi SPAM, nantsi ke:
tags: ezona ndlela zilungileyo ze-imeyileIsihluzi sogaxekileAmagama aphambili okucoca spamamagama okucoca ogaxekileamagama ogaxekilespamassassinUmxholo wesifundo yeyona ndlela ilungileyoimigca yesifundo
Yabelana ngesiqulatho sakho noMbutho woShishino